Sheekh Tawakal Yuusuf oo lagu xiray magaalada MINNEAPOLIS ee dalka Mareykanka
June 15, 2012 - Written by
MINNEAPOLIS:-War uu goordhow na soo gaarsiiyey Sheekh C/Qani Qardhaawi ayaa sheegay in maanta duhurkii xabsiga loo taxaabay mid ka mid ah ducaada magaalada Minneapolis waxaana Sheekh Cabdi Qani uu noo xaqiijiyey in la xiray Sheekh Tawakal Yuusuf oo in mudo ah ku noolaa dalka Mareykanka;ilaa haatan lama garanayo sabata lo xiray Sheekha.
Warka oo faahfaahsan dib ayaan idiinka soo sheegi doonaa hadii alle idimo waxaan alle uga baryeynaa Sheekh Tawakal Yuusuf in alle ka sii daayo xabsiga kuna arsuqo sabar iyo dulqaad.
3 comments on “Sheekh Tawakal Yuusuf oo lagu xiray magaalada MINNEAPOLIS ee dalka Mareykanka”
Sh Maxammed Ibnu Ibraahim Al Cawad " Abu Axmed" on June 16, 2012 at 11:12 pm said:
Assalaama Caleykum Waraxmatulaahi Wabarakaatuh.
Qof walba oo diinta Islaamka ka run sheega waa inuu galaa xabsi, ciqaab, ama naftiisa oo la dilo sidda ka dhacaysa meelo badan oo ka midda adduunkan aynu ku noollahay, ha ahaato meelo ay maamulaan gaalo amaseba ha noqoto meelo ay ka taliyaan muslimiin caasiyiin ah oo sharcigoodda gacmahooda ku qortay. Waxaan Sh Tawakal Yuusuf uga barayaynaa ALLAAH SWT jallah jalaaluhu inuu inta uu ku sugan yahay xabsiga uga dhigo mid diintiisa adkaysa, isla markaana ka dhigo mid ka soo samata baxa xabsiga uu ku jiro. Walaalkeen waxaan leenahay ducada habeen iyo dharaarba kaama iloowno, aqbalkana ALLAAH SWT baan ka sugaynaa in xoriyadaada laguu soo daayo Aamiin – Shukran walaalaha Halgan.net oo mar walba u taagan quudinta akhbaaraadka muslimiintu u baahan tahay. Wa Bilaahi Towfiiq.
farxaan minneapolis on June 15, 2012 at 11:52 pm said:
ilahay ha soo deaayo wadaadka…aamiin
umu hibaq minneapolis on June 15, 2012 at 11:51 pm said:
ASC Illaahay Wadaadka haka soodaayo cadwga gacantooda uu galay